MUUQAAL: Dr. Bulxan oo Hargeisa ka sheegay inuu Muqdisho u tagayo arinta maamulka S.land oo Riyada lagu Jirayn - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Dr. Bulxan oo Hargeisa ka sheegay inuu Muqdisho u tagayo arinta maamulka S.land oo Riyada lagu Jirayn
HMN:- Dr Bulxan wuxuu ka mid ahaa raggii ka qayb galay wadahadalkii u socday dawlada federaalka iyo maamulka Somaliland , wuxuuna hadda isaga oo Hargeysa jooga sheegay in uu booqan doono magaalada Muqdisho si uu dood u galiyo fikirka gooni isu – taaga “Somaliland”.
Bulxan ayaa wuxuuna sheegay in uu kala doodi doono arrintaas dadka reer Koonfureed ka oo kaliya , oo aanu arrinta kala fadhiisan doonin qof ka soo jeeda gobolada Waqooyiga Soomaaliya .
Arintan ayaa ka dhigan in aqooyahankii reer waqooyi kuwooda aaminsan in Soomaaliya la kala gooyo ay soo garawsanayaan in Muqdisho Iyo dawladda federaalka gacanta ugu jirto go’aanka kama danbaysta ah ee masiirka Soomaalida dawladaha ah.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA DR. BULXAN
Waxayna ahayd in 1991 fikradahan la soo bandhigo, sababtoo ah Soomaaliya wakhti badan kama lumeen sida muuqatana hadalada Dr Bulxan ee uu sheegay in wakhti lumay ma lumeen.
Waxaa Haboon in maamulka Somaliland uu si toos ah ula falgalo dawlada federaalka oo haddaba dad reer waqooyi ahi waa joogaane garawsado inay matalaan bilow fiicanna noqoto. Mustaqbalkana wixii laysku hayo si walaaltinnimo ah loo gorfeeyo, oo geedaha la saaran yahay laga soo dego.